BB&S Lights Quarantine short: We Can’t Go On | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner and Producer of NAB Show LIVE. Broadcast Engineering News
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » BB&S Lights Quarantine တိုတို - ကျွန်ုပ်တို့မသွားနိုင်ပါ
48ရိယာ ၄၈ အရောင်သည်မြင်ကွင်းကိုမီးထွန်းပေးပြီး Force5LEKO သည်မီးမောင်းထိုးပြသည်
BB&S Lights Quarantine တိုတို - ကျွန်ုပ်တို့မသွားနိုင်ပါ
ဒါရိုက်တာ Michael Livingston၊ Amanda Dreschler နှင့် DP Dan Kneece တို့ဖြစ်သည်
အမန်ဒါဒရက်ရှလာနှင့်မိုက်ကယ်လီဗင်တန်သည် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုကိုသူတို့၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်သူတို့သည်အထီးကျန်အတွေ့အကြုံကိုလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး၊ ရပ်တန့်သွားစေခဲ့သည်။ ဇာတ်ညွှန်းရေးခြင်း၊ အမှုထမ်းနေရာအများစုကိုလေ့လာခြင်းနှင့်သူတို့၏လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ဒါ့အပြင်သူတို့ကသူတို့သူငယ်ချင်းတွေဆီကအကူအညီအနည်းငယ်ရတယ်။ အားလုံးဝေးလံခေါင်ဖျား၊ COVID အားလုံး။
သူတို့အတူတကွသူတို့ခံစားခဲ့ရသည့်အလွန်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုထင်ဟပ်စေသောဇာတ်ညွှန်းကိုရေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောဖန်တီးမှုဖော်ပြချက်ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ၁၉ မိနစ်ဇာတ်လမ်းကိုအမှန်တကယ်ရွေ့လျားစေသည်။
သူတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်“ သဘာဝသယံဇာတများ” ကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ကြသည် ဟောလိဝုဒ် နေရာကိုအဖြစ်ခေါင်မိုးပေါ်တိုက်ခန်း။ Michael Valinsky ကိုခေါ်ဆိုမှုကသူတို့နှစ်ရှည်လများသူငယ်ချင်းကို Executive Producer အဖြစ်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးသူသည်ဒဏ္legာရီပုံပြင်များဖြစ်သော Steadicam အော်ပရေတာနှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး DP၊ Dan Kneece ကိုလှည့်ခဲ့ပြီးသူတို့၏ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူဖြစ်သည်။ မှာမိုက်ကယ် Bravin မှာ ကို Canon အသစ်တစ်ခု ကို Canon C300 MKII နှင့် Sumire တို့သည်၎င်းတို့ကို“ godsend” ဟုခေါ်သည်။
Zoom Production meeting with Michael and Amanda, Michael Valinsky, & DP Dan Kneece
“ 48ရိယာ ၄၈ ရှိအရောင်များသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းပြီးရုပ်ရှင်၏နီယွန်ပုံသဏ္gettingာန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့ကဂျယ်လ်နဲ့အရောင်တောက်တောက်ပာအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချော်ရည်မီးခွက်မြင်ကွင်းတွင်အရောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ချော်ရည်မီးခွက်နှင့်နီးကပ်စွာကိုက်ညီစေရန်ညှိနိုင်ပြီးမီးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာများပေါ်တွင်အလင်းရောင်ဖြာပစ်လိုက်သကဲ့သို့ကြည့်သည်။ 48ရိယာ ၄၈ သာမရှိရင်ဒီမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့သလိုမျိုးညှိနိူင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ” Kneece ကဤအလင်း၏စွမ်းအား၊ ဘက်စုံသုံးမှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ အခြားအရောင်အရင်းအမြစ်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့ချိန်ညှိနိုင်မှုရှိတယ်။ ”
48ရိယာ ၄၈ အရောင်သည်မန်ဒါနှင့်တိုက်ခန်းကိုမီးထွန်းပေးသည်
Amanda နှင့် Michael သည်မြို့တစ်မြို့လုံး၌ရှိနေစဉ် Dan သည် Marina Del Rey တွင်ရှိခဲ့သော်လည်းအဖွဲ့သည်စည်းချက်မပျောက်ဘဲအဝေးမှရှေ့သို့ချီတက်သွားခဲ့သည်။ Kneece က“ လှိုင်းပုံသဏ္aာန်ဟာလက်တော့ပ်နှစ်ခုကနေတစ်ဆင့်အချက်ပြလိုက်တာကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးပဲ” ဟုပြောခဲ့သည်။ မိုက်ကယ်၏လက်တော့ပ်ကိုထုတ်လုပ်မှုမော်နီတာကိုညွှန်ပြခြင်းဖြင့်၊ ဒီရုပ်ရှင်မှာအလုပ်လုပ်ရတာဟာသာမန်ဗီဒီယိုရွာကနေသင်အလုပ်လုပ်တဲ့တခြားရုပ်ရှင်တွေနဲ့သိပ်ပြီးမတူဘူး။ တကယ်တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကတကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်”
အသင်းသေးငယ်သည်ဖြစ်စေမရည်မှန်းချက်မှာ High-end ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်ကောင်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်အထူးသဖြင့်မန်ဒါဒရက်ရှlerကတွဲဖက်ဒါရိုက်တာ / ဦး ဆောင်ဇာတ်ကောင်ကိုအနီးကပ်ရိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ gossamer အသားအရေကိုဖမ်းယူခြင်းသည်သူတို့၏ရုပ်ရှင်များစွာအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မိုက်ကရိုက“ ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့မိတ်ကပ်၊ ကွဲပြားတဲ့အလင်းရောင်တွေနဲ့အမြဲတမ်းစမ်းသပ်နေပါတယ်။ “ ဒီတစ်ခေါက်မှာ48ရိယာ ၄၈ နဲ့အလှအပရိုက်ကူးရတာအရမ်းလွယ်တယ်။ အလင်းရောင်ရဲ့အရည်အသွေးကအရမ်းနူးညံ့တယ်၊ အထူးသဖြင့်ပျော့ပျောင်းသေတ္တာနဲ့ဆိုရင်ငါတို့အနီးကပ်မြင်ကွင်းတွေကိုတောက်ပတဲ့အရည်အသွေးရှိတယ်။ ဒန်၏အကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည့်နေရာကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုက်ပြီးအလင်းသည်သူမအသားအရေကိုလှပစွာတောက်ပနေစေသည်။
locationရိယာ ၄၈ တိုက်ခန်းတည်နေရာ
အဆိုပါချော်ရည်ဆီမီးခွက်မြင်ကွင်းတစ်ခုဝေဖန်ခဲ့သည်။ Kneece ကရှင်းပြသည်မှာ“ သဘာဝအားဖြင့်လားဗာမီးခွက်များသည်တိကျသောအလင်းအရင်းအမြစ်များမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်Areaရိယာ ၄၈ အရောင်ရှိသောကောင်းမြတ်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ ကျနော်တို့ချော်ရည်မီးခွက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျကိုက်ညီပြီးဂျယ်လ်အနည်းငယ်နှင့်ခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေရန် Rotolight ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လှောင်ပြောင်ဆုံးအပိုင်းကတော့ကင်မရာ၊ အလင်းနဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကိုနေရာချခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုမီးချောင်းများမှချန်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ချော်ရည်မီးလုံးသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မျက်နှာများပေါ်တွင်မလိုချင်တဲ့အလင်းမရအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အလင်းရောင်နှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းများခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာလုပ်ဖို့အလွန်တိကျသောရိုက်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
Livingston ကဖြည့်စွက်။ အရောင်တန်းသည်အရာအားလုံးကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်အောင်ကူညီခဲ့သည် ကို Canon Sumire မှန်ဘီလူးများနှင့်48ရိယာ XNUMX သည် A + ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လှပသောအလုပ်ကိုရှာဖွေနေပါက၎င်းသည်သေချာပေါက် Amanda ၏အတည်ပြုချက်ကိုရရှိလိမ့်မည်။
၎င်းတို့သည် ပို၍ ခက်ခဲသော LED မီးများကိုလည်းရွေးချယ်ကြသည်။ Livingston ကပြောကြားသည်မှာ“ The Force-7 သည်အလင်းသားရဲတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သီချင်းဆိုချိန်ညှိခြင်းတွင်မီးမောင်းထိုးပြရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်မရာ၏နောက်ကွယ်ရှိအစုံနှင့်ဝေးသည် (ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ခန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့သည်!) ရှိပြီးနောက်ခံပေါ်တွင်ပြီးပြည့်စုံသောစက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာအမန်ဒါကျီးအဖြစ်ဝတ်ဆင်သည်အဘယ်မှာရှိ sequence ကိုအတွက်နောက်ခံအလင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ pinpoint မှရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်သူမ၏ဆံပင်နှင့်အမွေး၏နောက်ကျောအပေါ်ပြီးပြည့်စုံကန်ရနိုင်ဘူး။ ဒါဟာသိမ်မွေ့ပေမယ့်အပြောင်းအလဲအားလုံးကိုလုပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။
“ ဒီ Compact Beamlight ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာယာဉ်အမှုထမ်းတွေမရှိတဲ့နေရာတွေအများကြီးမရှိတဲ့ရိုက်ကူးမှုအခြေအနေတွေမှာပါ။ ဒါဟာဆံပင်မီးခွက်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကြီးနှင့်ကျွန်တော်တစ် ဦး ကန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေရာလေးကိုအတွက်လာ၏။ အထူးသဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည့်တစ်ခုမှာ Livingston က“ floating iPhone key shot” ဟုခေါ်သည့်နိဂုံးချုပ်ဖြစ်သည်။ “ CBL-1 ကိုကျွန်ုပ်တို့အဖြူရောင်ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိဖုန်း၏နေရောင်ခြည်အလင်းရောင်ကိုတုပရန်အနားကွပ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မှိန်နေသောထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအထူးပုံသဏ္highlightာန်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်တိကျနိုင်ခဲ့သည်။
Dan Kneece ဟာကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ quarantine အတွက်ရိုက်ကူးပထမ ဦး ဆုံးတသူ၏တုံ့ပြန်မှု? “ ဒီရုပ်ရှင်ကလှပတင့်တယ်တယ်၊ အိမ်အားလုံးကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာလုပ်ခဲ့တာ၊ ငါတို့ကအနိုင်ရတာတစ်ခါမှမခံခဲ့ဘူး။ တကယ်အံ့သြစရာပဲ”
ငါတို့မသွားနိုင်, ရေးသား, ညွှန်ကြားနှင့်အန်ဒါ Dreschler နှင့် Michael A. Livingston သရုပ်ဆောင် 2020 Covid-19 quarantine စဉ်အတွင်းပစ်ခတ်ခြင်းနှင့်ပြီးစီးခဲ့သည်။ မှာကြည့်ပါ - vimeo.com/447406368
Lewis ကဆက်သွယ်ရေးကပြင်ဆင်ပြန်ကြားရေး: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
မယုံကြည်နိုင်လောက်သောဒေါက်ဂလပ်ကစ်ကလန်၏ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးသောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူအခမ်းအနား - အောက်တိုဘာလ 22, 2020
DoPchoice သည် ARRI Orbiter အတွက် Custom Modifiers များပို့ဆောင်ပေးသည် - အောက်တိုဘာလ 15, 2020
SmallHD Indie7Smart Monitor - လွတ်လပ်သောဘတ်ဂျက်ဖြင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများအတွက်ဖန်တီးမှုထိန်းချုပ်မှု - အောက်တိုဘာလ 15, 2020
Amanda Dreschler ဧရိယာ 48 BB&S BB&S Lighting Cine ရုပ်ရှင်ရုံ ရုပ်ရှင်ပညာ စီးပွားဖြစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ပညာ ဓာတ်ပုံ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး အင်အား ၇ အယ်လ်အီးဒီ အလင်း မီးပြတိုက် အလင်းရောင် အလင်းရောင်ဒီဇိုင်း ဒေသခံ 728 Lumix S1H ဂီတဗီဒီယို ဖော့စဖောအလင်းရောင် ပိုက်လိုင်း ထုတ်လုပ်မှု ရောင်ပြန် 2020-09-24
ယခင်: PrimeTime ၏ LED Remote Broadcast Kit ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်
နောက်တစ်ခု: AJA သည် Streaming အသစ်၊ IP၊ 12G-SDI၊ Scan conversion Solutions နှင့် Updates အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်